Kuwana Wako Munyika Yakazara | Martech Zone
Kuwana Wako Iwe Munyika Yakazara
China, Gunyana 10, 2015 China, Gunyana 10, 2015 Venkat Viswanathan
Munzvimbo yanhasi yemakwikwi yekutengesa, yakasarudzika inopa kusiyanisa mabrands muhondo yekutora kutarisisa kwevatengi. Makambani ari muindasitiri iyi ari kuyedza kuendesa isingakanganwike, yevatengi ruzivo rwekuvaka kuvimbika uye pakupedzisira kuvandudza kutengesa - asi zviri nyore kutaura pane kuzviita.
Kugadzira urwu ruzivo rwechiitiko kunoda maturusi ekudzidza nezvevatengi vako, kuvaka hukama uye uzive kuti ndeapi marudzi ezvekupihwa zvavanofarira. Izvo zvakakosha zvakaenzana kuziva izvo zvinopihwa hazvina basa, kudzivirira kunetsa kana kuparadzanisa vatengi vako vakavimbika.
Iwo "Matatu A's" eUkama Hwehukama
Kuvaka hukama hwevatengi mukutengesa kunogona kuputswa kuita nhanho nhatu: kutora, kushandiswa uye basa.
kutora - izvi zvese ndezvekutarisisa kwevatengi pazvigadzirwa uye nekuwana vatengi vatsva, izvo zvinoreva kusvika kune vangangotenga mumusika wakakura nekutengesa kunoitika, kudyidzana kwechiteshi, kushambadzira uye zvinopihwa.
Activation - mutengesi anotarisa pakuita kuti vatengi vaite chimwe chiitiko kana kutevera imwe nzira yaunoda iyo inowedzera kukosha kwevatengi. Izvi zvinogona kureva kushanyira chitoro nhamba yakapihwa yenguva pamwedzi, kupedzisa imwe mhando yekutengesa kana kuwedzera ruzivo rwezvakapihwa zvakasiyana. Chinangwa chechikamu chekusimudzira ndechekudyidzana kwevatengi nechiratidzo, zvichiita kuti mutengesi azviite uye kuvaka hukama.
Activity - chikamu chekupedzisira ndipo panowanikwa zvirongwa zvekuvimbika uye mabhenefiti.
Nepo chikamu chekutanga chekuvaka hukama chiri pamusoro pekufambiswa kwakawanda, zvikamu zviviri zvinotevera zvese zvine chekuita nemunhu. Nzira chete yekumisikidza uye zviitiko zvezviitiko zvinobudirira ndeyekuti mutengi ane hanya nezvakapihwa kana chigadzirwa.
Kana chinhu chakakurudzirwa kana kupihwa kwakapihwa kuri kunze kwechiratidzo, nei vangazvibatanidze? Mupfungwa iyi analytics uve chishandiso chakakosha kune vatengesi avo vari kutsvaga kugadzirisa zvavanopa uye kuvaka kuvimbika nevatengi vavo.
Analytics inogonesa vatengesi kuchengetedza zviri nyore izvo zvinopa kuenderana netariro yavo uye izvo zvisingaite, pakupedzisira zvichivagonesa kubvisa izvo zvisina kukodzera zvinopihwa, kudzidzisa kusvika uye kuva sosi yakavimbika yeruzivo uye zvigadzirwa kune mumwe nemumwe mutengi.
Vatengi vakabatikana, uye kana ivo vachiziva imwe brand ichave ichiendesa chaizvo zvavanoda zvichibva pakutenga zvakapfuura uye zvido, ndicho chiratidzo chavachaenda.
Kushanda iyo Dhata
Saka maturusi api anodiwa kuita kuti uku kuvaka kwehukama kuvepo?
Kunyangwe vazhinji vatengesi nemasangano vane mukana wehuwandu hwedata - zvese zvechinyakare uye zvemagariro - idambudziko riri kuenderera mberi kuti riitwe, simudza zvikamu zvakakosha zvevatengi uye ita munguva chaiyo kune zvinodiwa nevatengi. Nhasi uno dambudziko rakanyanya kusangana nemasangano nderekuti ndizvozvo kunyura mu data uye kushaya nzara yekuziva. Muchokwadi, zvichitevera kuburitswa kweazvino ongororo na CMOSurvey.org, director wayo Christine Moorman akataura kuti rimwe rematambudziko makuru kusachengetedza dhata asi panzvimbo pezvo kugadzira nzwisiso dzinoitika kubva kudhata irori.
Kana vatengesi vakashonga nemidziyo yekuongorora chaiyo, zvakadaro, data hombe rinogona kuva mukana wakawanda. Iyi data inobvumidza vatengesi vevatengesi kuti vabudirire mune yekumisikidza uye chiitiko chikamu chehukama hwekuvaka - ivo vanongoda kuziva mashandiro acho. Kunyatsobatanidza bhizinesi, dhata uye masvomhu kuburitsa ruzivo rwekuti mutengi angaite sei kuchipo chakapihwa kana kudyidzana zvinoita musiyano sezvo makambani anoshanda kugadzirisa kwavo kunongedza uye kuita kwavo.
Analytics inogonesa vatengesi kuti vanzwisise kupenga kwedata kwanhasi uye nekuvandudza zvechokwadi munzvimbo idzi, izvo zvinobatsira kuvaka kuvimbika nemari.
Chimwe chikamu chekutengesa uko izvi zviri pachena pachena vatengesi. Nharembozha maapplication, mabhekoni uye mamwe matekinoroji anoburitsa mafashama e data kutenderera irwo-chitoro rwendo rwevatengi. Smart vatengesi uye mabhenji ari kushandisa analytics kugadzirisa iyo data mune chaiyo-nguva uye kugadzira zvinokodzera zvinopa zvinoita kuti vatengi vasati vabva muchitoro.
Semuyenzaniso, Mhando dzeHillshire dzinokwanisa kuteedzera vatengi muzvitoro vachishandisa iBeacons.
Haisi chakavanzika chekuti nyika yanhasi yekutengesa iri kukwikwidza kupfuura nakare kose. Kuvaka kuvimbika kwevatengi ndiko kutarisa kwemhando yepamusoro, uye nzira chete yavanobudirira kuita izvi ndeyekuti vawane zvemukati nevatengi vavo.
Izvo hazvizoitika nehusiku, asi kana zvikasvikwa nemazvo, vatengesi vane kugona kunyatsoisa yavo data revatengi kuti vashande kuti vanzwisise zviri nani zvido zvemumwe nemumwe uye zvavanofarira. Ruzivo urwu ndiyo kiyi yekuvandudza hunhu, hukama hwevatengi uye pakupedzisira mutsetse wepasi wekambani.
Tags: kutorakushandiswaActivitychiitikobig datavapotechkuvimbika kwemutengihillshire zvigadzirwaibeaconBeaconsYeMahara neThebhu Kushambadziravatengesikunotenga
SaMuvambi uye Sachigaro we LatentView, Venkat ndiye anoona kumashure kweLatentView. Akabatsira vatengi vaFortune 500 vatengi kuti vawedzere India-based offshore services modhi modhi mune zvemari masevhisi uye materevhizheni zvikamu kweanopfuura makore gumi. Ane makore anopfuura gumi nemasere echiitiko mukutungamira kwekubvunza, tekinoroji uye epasirese IT masevhisi manejimendi.
Zvemukati Zvako Zvinonhuwa Nekuti Zvakarasika Zvinhu Izvi
Nzira yekusarudza Email Service Provider